Jeequmsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ka'een lubbuun nama 2 galaafatame - NuuralHudaa
Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise
Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame
Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame
Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame
Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise
Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan
Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii haalli Ityoophiyaa keessa jiru kan isa yaaddeesse tahuu beeksise
Bulchiinsi mootummaa saba Sidaamaa ifatti hundeeffame
Mootummaan “Jawaar Muhammad fi warri isa waliin ture hoggantoota mootummaa ajjeesuuf yaada qaban” jechuun yakke
Home/Odeeyfannoo/Jeequmsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ka’een lubbuun nama 2 galaafatame
Jeequmsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ka’een lubbuun nama 2 galaafatame
Magaalaa Dirree Dhawaa naannawa Qafiraatti guyyaa har’aa jeequmsa gareen “SAATANAWU” jedhee of mooggaase kaase hordofuun, lubbuun dargaggoota 2 poolisii kora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaaattin galaafatamuu odeeyfannoon naannawa irraa nu gahe ni addeessa.
Namni Magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbisne akka nuuf himetti:
“Gareen “Saatanawu” jedhee of mooggaase kun yeroo dheeraa magaalattii iddoo gara garaatti saamicha fi ummata dararaa ture, har’a immoo miseensonni garee kanaa naannawa Qafiraa irraa hanga Caati Taraatti jequmsa eega kaasanii booda baqatani, yeroo kanatti Poolisiin Kora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa ummata nagayaa irratti dhukaasuun dargaggoota lama rasaasan rukutanii ajjeesan” jechuun nuuf hime.
Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa kanaan duras, poolisiin kora bittinneessaa magaalattii ummata adda qooduun gama tokkotti goree ummata darara jechuun komataa turan. Haaluma kanaan har’as poolisoonni garee “Saatanaawu” jedhamu deeggaruun tarkaanfi gara jabeenyaa fudhataniin, dargaggoota ajjeefamaniin alattis namoonni heddu miidhamanii gara hospitaalaa kan geeffaman tahuun beekamee jira.
Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa, Jeequmsi kun waaree booda kan ganamaa irra kan tasgabbaaye fakkaatus, caasaan poolisii kora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa hanga jijjiiramutti magaalattiin sodaa jeequmsaa keessaa hin baatu jechuun nuuf himan. Haaluma kanaan galgala kanas magaalattii keessa dhukaasni kan jiru tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.
Dirree Dhawaa Ityoophiyaa jeequmsa
July 8, 2020 sa;aa 4:36 pm Update tahe